Umenzi wasekhaya, uMthengisi, uMzi-mveliso-ukunciphisa, iintshulube ezinciphisa iintshulube, iibhokisi zeeplanethi, iisantya zokunciphisa, ukwahluka, iihelical gear, ii-sprial gear gear, iibhokisi zegiya zezolimo, izixhobo zeetrektara, igiya yelori, ibhokisi yeebhokisi
Izixhobo ze-HZPT zidlulile ukuqinisekiswa kwe-ISO 9001. Amaziko ethu okuvelisa apasile ukuqinisekiswa kwe-TS 16949.
Sebenzisa iikhonsepthi ezinqinileyo ukuhlengahlengisa iinkqubo zeshishini ukuphelisa amanyathelo-ongezelelweyo
Seka ubambiswano kumthengi ukuya kwishishini lokuhambisa
Jonga Umsebenzi Wethu
+ Ukubuyela umva kwinqanaba eliphantsi le-servo worm gearheads
+ Umahluko wesantya se-UDL
+ Isinciphisi seentshulube
+ Ukunciphisa izixhobo zecycloidal
+ Ibhokisi yemiyalezo yoomatshini bezolimo
+ Iibhokisi zegiya zeplanethi
+ Iimoto ezilungiselelwe Helical
+ Iimoto ezizenzekelayo zentsimbi
+ Shicilela jacks
+ Iibhokisi zegiya zokwenza umkhondo kunye nemoto
+ Izinto zokunciphisa ezizodwa kunye neebhokisi zegiya
+ Iibhokisi zegiya zenkqubo yokunkcenkceshela
+ AbaSebenzi beWorm & Bevel Gear
+ Ii-Motors ezinobungakanani obukhulu beDC
+ Inkqubo yokuhambisa yomxhubi weTMR
+ Ukunciphisa iGear
+ Ukunciphisa i-SMR Shaft
+ Abaphethe iiplanethi
+ Amagiya eringi
+ Iiringi zeringi zoncedo
+ Umahluko umahluko
+ Imigodi ye-spline kunye nemingxunya yegiya
+ Iimoto ze-Spur kunye neegiya ze-helical
+ Iintshulube kunye neentshulube
+ Amagiya Wotho kunye nezixhobo spiral Wotho
+ Ingalo yeTorque
+ Izixhobo zeetrektara
+ Izixhobo zeforklift
+ Iiraki zeGiya
+ Iigiya zeempompo zeoyile
+ Isangqa esirholayo / Ukuthwala ngokuthwala
+ Iimpompo zeGiya
+ Igiya elincedo
+ Inkqubo yokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi
+ Iimoto zothotho zeY2
+ Iimoto zechungechunge lwe-Y
+ YD series multi-isantya Motors
+ Iimoto zothotho lwe-YS
+ Iimoto zothotho zeYC YL
+ Iimoto zeYeJ
+ Izinto zobomi
+ I-TYGZ iimoto ezihambelanayo
+ I-TYBZ iimoto ezihambelanayo
+ Iibrashi ze-dc motors
+ Imoto ye-Electirc
+ Rhoqo-Umhlaba-osisigxina-iimagnethi Motors (REPM MOTORS)
HZPT yingcali ekwenzeni zonke iintlobo zegiya kunye nebhokisi yebhokisi kunye nesixhobo sokunciphisa isantya njenge: NRV isibulali somzimba (i-NMRV worm gearboxes), ukulahla isantya sokunciphisa isantya kwentsimbi, isantya sokunciphisa isantya sentsimbi, isinqumli sombane sokunciphisa izixhobo, izixhobo zokunciphisa ihelical Iintshulube zesixhobo sokunciphisa umbane, Isinciphisi sokubuyisa umva esisezantsi, Isixhobo sokuwela umva osezantsi, iigearbox zebhokisi yezolimo, ibhokisi yezixhobo zetrektara, ibhokisi yezixhobo ezenzekelayo, iibhokisi zeeplanethi,…
Ukudibanisa urhwebo, umzi-mveliso kunye netekhnoloji iyonke, i-Hangzhou Ever-power Machinery Co, Ltd ngumatshini wokunciphisa isantya e China kunye nefektri yokunciphisa izixhobo, sikhethekileyo ekuveliseni isinciphisi sesantya, ibhokisi yezixhobo, izixhobo zokufudumeza izixhobo kunye neebhokisi zegiya. Inikezelwe ukubonelela ngesisombululo esikhethekileyo, esifanelekileyo nesisombululo sobuntu.
Unipolar ukunciphisa i-WKS
I-WJ YOKUFUNDA UMSEBENZI WOKUGQIBELA
WJ uthotho worm-izixhobo ngesantya sokunciphisa inoveli, imbonakalo intle, incinci, Inzima ukukhupha umzuzu, ukuhambisa indawo, ingxolo encinci inayo. Ngaba ungadibana noomatshini bombane okanye isitshixo esinganyatheliyo se-awl yeplanethi ye-UD ngqo, ulwakhiwo ludibene. Imveliso iintshulube umbungu umngxuma, umxube ukuxubana uthambekele kwaye bazikhathaze asi kuphela, kakhulu nako ukuxuba isibini ukuthambeka kwaye bazikhathaze asi asi, Kukho bhetyebhetye ngakumbi.
Ukunciphisa iDyclo Drayivu
Isantya se-udl umahluli we-nmrv umbungu wokunciphisa imbewu yecycloidal izixhobo zokunciphisa izixhobo zentsimbi ezinciphisa izixhobo zentsimbi ezijolise kumatshini wezolimo oomatshini bezolimo abajikelezayo beenqwelo-mafutha
Iiyunithi zegiya zentsimbi zineentlobo ezintathu: 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 90, zine-lead lead worm drive.Ikhohlo lasekhohlo nelasekunene le-worm shaft usebenzisa i-engile ekhokelayo eyahlukeneyo, ebangela ubukhulu bezinyo ukutshintsha ngokuthe ngcembe, Ukuze ukwazi ukushukuma umbungu shaft kwaye uhlengahlengise ukubuyela umva.
Sizimisele ukuphucula ubomi babantu nokusingqongileyo ngokusebenzisa itekhnoloji yolawulo lwemveliso ethembekileyo, efanelekileyo nekhuselekileyo.
Iinkampani ezibonelela ngezi mveliso kunye neenkonzo zixhomekeke kuthi ekuncedeni ukusombulula eyona ngxaki inzima yombane, i-hydraulic, kunye nemiceli mngeni kulawulo lwamandla. Kuba asinakuze sizilibale izinto ezibalulekileyo. Kungumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuba isebenza ngokufanelekileyo.
Indawo yefektri iyonke
Injineli yeR & D yobungcali
Inkxaso ye-24 × 7 yenye yeenkonzo ezilungileyo kwinkampani.
Inkxaso ye-24 × 7 yokubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni nangaliphi na ixesha, naphi na emhlabeni.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ujonge iimveliso zethu zekhathalogu kunye noluhlu lomatshini.
Fumana iinkcukacha zobugcisa ukukhetha kunye nokuthenga imveliso
Siza kunceda ukufakela kunye nokugunyazisa ebaleni.
Ukulungisa / Buyisela
Ukuchonga iingxaki kwaye uchonge amanyathelo okulungisa.
YINTONI UKUTHENGA NGOKUGQIBELELEYO, NANINI NA?
Kwilizwe lokuhambisa amandla ngoomatshini, zininzi iindawo ezihambayo, kwaye izinto zinokuba nzima ngokukhawuleza. Inxalenye ebaluleke kakhulu kwezi nkqubo ziibhokisi zegiya- oomatshini bekhompawundi abagqithisela amandla ukusuka kwisindululo sokuqala ukuya kumthwalo. Izinciphisi zegiya zezona zinto kugxilwe kuzo kweli nqaku.
Kwizinto ezithandathu ezisisiseko, oomatshini abalula, iibhokisi zegiya zisebenzisa iWheel kunye ne-asi kunye / okanye iScrew (ukunciphisa umbungu) ukwenza umsebenzi ngokukuko ngokufumana inzuzo yomatshini. Iimoto zenzelwe ukuba zisebenze kwi "revolutions ngomzuzu" othile okanye kwi-RPM kwaye, ngelixa esi santya singalungiswa ngokusetyenziswa kwe IiDrive eziQhelekileyo zoRhoqo, kwiimeko ezininzi kulunge ngakumbi ukusebenzisa iseti, ulungelelwaniso oluthile lokuhlengahlengisa isantya semveliso kwaye ngaloo ndlela inyusa torque.
Umzekelo, ukuba imoto ijika nge-1800 RPM, kwaye loo moto idityaniswe kwi-10: 1 yokunciphisa izixhobo, isinciphisi siya kukhupha i-180RPM. Ukuba loo moto inemithwalo epheleleyo yokulinganisa i-30 lb.ft., emva koko isiphumo esivela kwi-10: 1 yokunciphisa (ngokuthatha umlinganiso we-85%) iya kuba ngama-255 lb.ft. Ukubonelela ngokunyuka okukhulu kwimisebenzi enokwenziwa. Izicelo eziqhelekileyo zolu hlobo ziya kuba kukuhambisa, apho amandla okuphuma efuna isantya esithile sokusebenza kunye nokunyusa itorque yokuhambisa izinto ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Iimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa eJapan, eUnited States, eJamani, mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Abathengi bethu baquka abathengi abaninzi be-OEM abagxile koomatshini bokwakha. Sisebenzisane neenkampani ezininzi ze-Fortune 500 ukuze zibe ngomnye wabathengisi bazo base China.
Sithumele iimveliso zethu kubathengi kwihlabathi liphela kwaye sazenzela igama elihle ngenxa yomgangatho ophezulu wemveliso kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba banxibelelane nathi bathethathethane ngamashishini, babelane ngolwazi kwaye basebenzisane nathi.
thina abasebenzi abangaphezu kwe-1500 abasebenzi, kwaye cnc oomatshini ukujika kunye namaziko umsebenzi cnc.
Singomnye wabenzi abaphambili nabanikezeli eTshayina, khetha abavelisi abasemgangathweni, abanikezeli, abathengisa kwelinye ilizwe ku-china-reducers.com
IMIBUZO EQHELEKILEYO MALUNGA NOKUNCIPHA IINGCEBISO
Xa kuziwa kwiinkqubo ezibandakanya ukunciphisa izixhobo, kukho imibuzo emibini evela rhoqo.
"Ndisikhetha njani esona sincedisi somsebenzi"
“Into endinayo ngoku ayisebenzi kakuhle. Ndingayifumana njani inkqubo ebhetele? ”
Yomibini le mibuzo yehla kukuba nomntu onolwazi olululo kunye namava akuncede ngokwakha inkqubo yakho efanelekileyo. Ukuba ungumhambisi, singathanda ukuthetha nawe malunga neemfuno zakho zokunciphisa izixhobo, kwaye ukuba ufuna umhambisi, singathanda ukukudibanisa.
Izinto zokunciphisa izixhobo ziyinkimbinkimbi kodwa ukukhetha eyiyo akufuneki kube njalo. I-HZPT inokhetho olubanzi lomgangatho, oluthembekileyo, olufikelelekayo oluya kulungela iimfuno zezolimo, umndilili, ioyile kunye negesi, ulungiselelo, ezemigodi kunye nokunye!